Samsung igwe na-aga imelite gam akporo Oreo | Gam akporosis
La Ọbịbịa gam akporo Oreo bịara n’ahịa ọnwa abụọ gara aga mepụtara ọtụtụ akụkọ. Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google na-eweta ọtụtụ mgbanwe. Ihe ndị a bụ mgbanwe na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe na ọ bụ ọganiihu pụtara ìhè Ruo ugbu a, mbata nke mmelite a na ngwaọrụ ndị ahụ na-adịghị nwayọ nwayọ. Ọ bụ ezie na ụdị a na-ekpughe ekwentị ndị ha ga-enwe ike imelite.
Ọ bụ ezie na nke a abụbeghị etu ihe niile. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ obi abụọ gburugburu ụfọdụ nke ụdị. Ọmụmaatụ Samsung. Ndi otu mba Korea ekpughebeghị ndepụta ekwentị niile na-aga melite gam akporo Oreo. O di nwute, edeputala ndepụta a.
Podemos mara niile Samsung ntị na ga-enwe ike imelite gam akporo Oreo. Yabụ ndị ọrụ ahụ niile nwere obi abụọ ma ọ bụ nwee nchegbu, nwere ike ịchọpụta ugbu a. Ngwaọrụ niile ga-enweta mmelite a n'oge ụfọdụ ha bụ ndị ọchịchị.
Ndepụta ahụ mere ka anyị nwee obi abụọ. Mana ọzọkwa Ọ na-enyere anyị aka ịhụ na Samsung emeela na ọtụtụ nke mere na ọtụtụ igwe dị ka o kwere mee nata Android Oreo. Ihe fọrọ nke ụlọ ọrụ zuru ezu nke ụlọ ọrụ kemgbe 2015 ga-enwe ike imelite. Yabụ imirikiti ndị ọrụ nwere ngwaọrụ nke ika ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọrụ Oreo ọhụrụ.
O di nwute, E gosipụtaghị ụbọchị ụbọchị mmelite a ga-apụta. Nke ahụ bụ naanị ajụjụ a ga-amata. Ihe anyị chere ga-amata n’izuụka n’abia. Mana anyị ga-echere ka Samsung kpughee ya.
Ihe niile na-egosi na mmelite na gam akporo Oreo ga-erute Samsung ekwentị ndị a n'afọ niile na-abịa. Ma, anyị ga-echere obere oge ruo mgbe ọ ga-abịa. Maka ugbu a, anyị nwere ike inwe obi ụtọ na ndepụta a. Ebe ọ bụ na anyị enweela obi abụọ. Ekwentị ndị ga-enwe ike imelite amaala ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Full ndepụta nke Samsung igwe na ga-imelite gam akporo Oreo
Samsung Galaxy S6 nwere ike ịnata Android Oreo
Ngwa kachasị mma na gam akporo iji zụọ mgbatị ahụ